I-Riff Resort, (i-Bad Lausick), i-1-igumbi le-26 sqm
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlexandra - Lohospo Service Team
UAlexandra - Lohospo Service Team unezimvo eziyi-1112 zezinye iindawo.
Igumbi eli-1 legumbi le-26 sqm
Amagumbi ethu eholide anegumbi eli-1 elitofotofo anobukhulu obuyi-26 m² kwaye axhotyiswe ngeebhedi ezimbini zeebhokisi zasentwasahlobo (nganye yi-90 cm ububanzi) zime kunye noomatrasi be-anti-allergenic entwasahlobo. Ngapha koko, umfanekiso wobuxoki weTV, iWiFi kunye nesefu ziyafumaneka. Ikhitshi eliquka umatshini wekofu, itoaster, iketile, imicrowave, 2-ring ring ceramic hob, ifriji, isinki kunye nezixhobo (iiglasi, isitya sokutya, i-cutlery, i-cookware kunye nezixhobo ezincinci zasekhitshini) kunye neseti yokutyela iyafumaneka ukuze uziphekele. Igumbi lokuhlambela libonelela ngeshawa yokuhamba.
Apartment kwiReef leisure pool. Ukungena kwamahhala, kuxhunyiwe kwi-corridor yebhati!
Nandipha ukuhlala ongalibalekiyo kwindawo esanda kuvulwa, ehlelwe yi-3-star resort, eqhagamshelwe ngokuthe ngqo kwiRiff spa kunye nephuli yokuzonwabisa ngepaseji yokuhlambela.
Ukongeza kwi-massage yakudala kunye nokusonga komzimba, isebe lethu lempilo yangaphakathi likwabonelela ngeeyure ezipholileyo kwizibini ezi-2 zonyango lwehlabathi: olukhethekileyo & lwabucala, ngokuphilisa kunye nokondla iRasul okanye ivumba lokuhlambela lokuthanjiswa ngaphantsi kwamanzi kwi-whirlpool. Ziphathe ngekhefu lakho lobuqu!
Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide ikwi-Bad Lausick eSaxony, iikhilomitha ezingama-40 kumzantsi-mpuma weLeipzig. I-Chemnitz ikwiikhilomitha ezingama-46 emazantsi e-Bad Lausick. Lo mmandla ulungele ukukhwela ibhayisekile nokuhamba intaba. Kukho amachibi aliqela ajikeleze idolophu yesithili saseBorna, eziikhilomitha ezili-13 ukuya ngasentshona. I-spa kunye nemyuziyam yesixeko iyafumaneka ukutyelela abathanda inkcubeko. Ivenkile enkulu inokufikelelwa ngeenyawo kwindawo ekufutshane.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-1 112 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Umbuki zindwendwe ngu- Alexandra - Lohospo Service Team
Izimvo eziyi-1 112
kuhle ukuba uyifumene indlela yakho kuthi, phambi kokuba uqale uhambo lwakho siza kukuxelela kancinci ngathi.Sisebenza njenge-arhente yolamlo kwaye ke ngoko asingomamkeli wakho othe ngqo. Sixhasa unxibelelwano olusebenzayo phakathi kwakho kunye nomninimzi wakho ngokudlulisela iinkcukacha zoqhagamshelwano emva kokubhukisha kwaye ngokuqinisekileyo siyakuvuyela ukuphendula yonke imibuzo yakho. Ngoko akukho nto ima endleleni yokuhlala kwakho.
Iqela lakho leLohospo
kuhle ukuba uyifumene indlela yakho kuthi, phambi kokuba uqale uhambo lwakho siza kukuxelela kancinci ngathi.Sisebenza njenge-arhente yolamlo k…